Ny KDE 4.10 dia hanana fanohanana amin'ny fampidirana ny bokotra menio amin'ny tsanganana lohateny | Avy amin'ny Linux
Araka ny Martin Gräßlin ny mpamolavola KWin lehibe, iza no namoaka ny sasany amin'ireo fanovana ho avy KDE 4.10, ity kinova ity dia hanana ny fahafahana mampiditra ireo menio ao amin'ny boaty ho an'ny lohateny.
Eny, ny tiako holazaina dia ny menu File, Edit, View, Tools, Help, sns, izay azo apetraka ao amin'ny bara hiseho ny bokotra Minimize / Maximize / Close, mba hamonjy toerana malalaka kokoa, ary tsy fantatro ny fomba ianao fa tiako ilay hevitra. Mampalahelo fa tsy manana pikantsary maneho amintsika ny mety ho endrik'ity fampiasa vaovao ity isika, fa toa izao (sary namboariko):
Tsy misy fisalasalana, ny KDE 4.10 no ho endriny tsara indrindra amin'ity tontolo Desktop ity ary manantena azy ho zavatra tsara aho.
Misaotra ny hevitra navoakan'i Christian, afaka jerentsika ity safidy ity miasa:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny KDE 4.10 dia hanana fanohanana amin'ny fampidirana ny bokotra menio amin'ny tsanganana lohateny
Tsy dia mitovy amin'ny sarinao izany, fa toy izao: https://www.youtube.com/watch?v=j0o1sRLRc60&hd=1. Izany hoe, misy safidy efatra: menio ara-dalàna, menio mitsangana (saingy izao dia kely kokoa ny bokotra, mitovy habe amin'ny bokotra mampitombo sy mampihena), menio ao amin'ny tontonana mipoitra eo an-tampon'ny efijery, ary menio fanondranana ( hampiasaina amin'ny tontonana natokana na tontonana Unity).
Mampiasa KDE 4.10 RC2 ao amin'ny Kubuntu 12.10 aho ary efa zatra ny menio bokotra iray :-).
: O Misaotra tamin'ny fampahalalana .. nataoko sary ilay sary hoe ahoana ny endriny .. 😉
Edito: Ary mijery tsara ny horonantsary, tiako ny fisehony
Mampalahelo fa ny tranokala LFFL dia mampiasa ny pikantsarinao novaina tao amin'ny iray amin'ireo lahatsoratr'izy ireo (http://www.lffl.org/2013/01/kde-410-massimizza-lo-spazio.html) tsy manome anao ny trosa mifanaraka aminy.
Imbetsaka ity tranonkala ity no manao toy izany amin'ny lahatsoratro, saingy tsy te-hanamafy izany aho, mbola nanana ny fisalasalako ihany ... fa ankehitriny, amin'ity tranga ity dia manamafy aho. Tena tsy etika amin'ny LFFL.
Mangataka fanafihana DDoS ny vahoaka !!! : D: D: D
mmmm tsara, tsy hita fa mamonjy habaka amin'ny resaka kinova ankehitriny. Toa tsara in'arivony tsara kokoa izy ity, ary ho an'ny tsiriko dia miasa kokoa, ilay kinova izay tantanan'i elav amin'ny sariny namboarina niaraka tamin'ny gimp, mampalahelo fa tsy io no volavolan-kevitra notapahin'i UU hampiharina
Fa maninona ianao no milaza fa tsy mamonjy habaka?
Raha ny marina, ny antony nanapahan-kevitr'izy ireo ny tsy hametraka ny menio feno ao amin'ny tsanganana lohateny (raha tsaroako avy amin'ny adihevitra momba ny lisitry ny mailaka) dia ny tsy fahazoan'izy ireo antoka fa misy toerana ampy foana hanehoana ny menio iray manontolo. Inona no hatao rehefa tsy mihabe ny fampiharana, na rehefa be loatra ny menus?
Ny fananana ny menio iray manontolo amin'ny bokotra tokana eo amin'ny ilany ankavia dia toa vahaolana mamy sy azo ampiharina. Saingy araka ny filazan'izy ireo, manandrana ny loko :-).
Manantena aho fa azo afindra izy io, satria ny bokotra ankavia no ampiasaiko.
Azo afindra tsy misy olana. Vao nanao ny fitsapana aho: https://dl.dropbox.com/u/54722/kwin-kde410rc2.png
Araka ny aseho amin'ny horonantsary, ny haben'ny tampon'ny feso feso dia mitovy amin'ny bokotra eo akaikin'ny fisarahana, bokotra aloha, sns. izay toy ny ao amin'ny kinova ankehitriny. Izay no antony ilazako azy. Raha ny habaka ho an'ny menio feno dia heveriko fa hitranga, na tokony hitranga, mitovy amin'ny zava-mitranga amin'ny kde ankehitriny, izany hoe, raha tsy ampy ny haben'ny fampiharana hampisehoana ireo menus dia fotsiny tokony asehon'izy ireo ireo izay azo zahana ary ho an'ireo safidy hafa ellipsis ary daty tokony haseho hifindra amin'izy ireo. Heveriko ihany koa fa ho voavaha ny habaka raha misy ny safidy roa, ny bokotra tokana ary ny menio feno toy ny ao amin'ny kinova ankehitriny. Na dia mazava ho azy aza, fantatro fa tsy tokony ho mora velively izany, fa ny farany dia hevitra fotsiny.
OK, azoko izao ny hevitrao :-). Ao amin'ny kinova Dolphin (KDE 4.9) amin'izao fotoana izao dia efa nafenina ny menio (na ny tokony ho izy, voafetra amin'ny bokotra iray eo amin'ny baraovana), mazava ho azy fa ny fiovana aseho amin'ny horonantsary dia tsy hitondra tahiry bebe kokoa habakabaka.
Na ahoana na ahoana, dia tadidio fa ity horonantsary ity dia avy amin'ny kinova taloha kokoa ary efa lany andro ankehitriny; amin'izao fotoana izao (KDE 4.10 RC2) ny haben'ny bokotra menio dia mitovy amin'ny haben'ny bokotra, mampihena, mampitombo ary manakaiky. Azonao atao ny manamarina azy amin'ity sary vao nampakariko ity: https://dl.dropbox.com/u/54722/kwin-kde410rc2.png
Amin'ny fomba Christian, notsoahiko fa ny bokotra dia tsy manana fampiasa roa (toy ny bokotra na amin'ny menio feno) avy amin'ilay horonantsary, satria tsy hitako io safidy io, saingy toa manana fidirana amin'ilay kinova vaovao ianao. Ankasitrahako izany raha hanafaka ahy amin'ny fisalasalana ianao.
Tsy haiko raha azoko tsara ny fanontanianao. Ao amin'ny KDE 4.10 RC2 dia misy safidy efatra: 1) menio ara-dalàna ao anatin'ny fikandrana (na amin'ny bokotra baraingo amin'ny rindranasa sasany, toa ny Dolphin na Choqok), 2) eo amin'ny tsanganana lohateny, 3) menio ao amin'ny tontonana pop-up eo an-tampon'ny efijery, 4) menio fanondranana (hampiasaina amin'ny tontonana natokana na tontonana Unity), mitovy amin'ny OSX.
Sa ny tianao holazaina dia hoe manana ny fampiasa amin'ny menio manodidina an'i Kwin ny bokotra? Satria ity menio ity dia azo idirana amin'ny tsindry havanana amin'ny tsanganana lohateny.
Endri-javatra tsara dia tsara izay ho entin'ity kinova KDE ity
Vao nivoaka i Wheezy hijery raha toa ka mandray an'izany rehetra izany ny fitsapana manaraka.
Nandritra ny fotoana ela dia nandamina ny KDE toy izao aho: http://gusta-who.x10.mx/screen.png
Ity fampiasa vaovao ity dia mety amiko 😀
Fomba ahoana no anaovanao an'izany?
mety miaraka amin'ny plasma-widget-menubar
Ary ny varavarankely mifehy angamba amin'ny Plasmoid Fanaraha-maso Window hafa
xbar na menubar ary ity: http://kde-apps.org/content/show.php?content=143971 na dia ny fisamborana aza dia mety hahatonga azy ho milay kokoa miaraka amin'ireo sary masina ary tsy avelany hampiasa ny "plasma theme" xD
Aorian'ny fametrahana ny rohy dia mila manitsy ity rakitra manaraka ity ianao:
~ / .kde4 / mizara / config / kwinrc
ary ampio eto ambany
BorderlessMaximizedWindows = marina
Torohevitra tsara inona 😛
Raha nahita ny sary novainao aho dia tadidiko ilay mpilalao MediaMonkey, izay napetrako andro vitsivitsy lasa izay tao amin'ny Win7.
Ny KDE 4.10 dia ho famotsorana lehibe 😀
Tsara. Saingy manana fisalasalana kely aho: azo atao ve izany na inona na inona haingon-trano eo am-baravarankely? Sa endri-javatra miavaka amin'ny lohahevitra haingo Oxygen?
Ity fisalasalana ity dia manameloka ahy satria tsaroako fa misy fomba iray hanalana ny "lohateny" amin'ny endriny Firefox, Chrome / Chromium, saingy io dia azo natao tamin'ny haingon-trano Oxygen fotsiny.
Raha ny zavatra azoko, ny hevitra dia ny haingon-trano rehetra tafiditra ao amin'ny KDE SC dia tohanana, fa farafaharatsiny ao amin'ny kinova RC2 dia miasa amin'ny Oxygen ihany.
Io no natahorako ...
Toa tsara ary misy sisa tavela ho an'ity kinova vaovao an'ny KDE ity ary andramo aloha ity asa ity raha hijery raha tiako izany.